Ngaba unokucebisa ukuthenga i-backlinks kwi-blogs yenethiwekhi (PBNs)?
Ngokwam, andinakukucebisa, okanye ndikubonise ukuba ngubani ozakuzama kuqala. Into endiyenzayo kukuba mna andiziveki njengeGrey-Hat SEO, okanye uThixo angavumeli i-Black-Hat SEO. Futhi ukuthenga i-backlinks kwi-blogs yangasese yecwecwe yikimu echanekileyo elixhaswe yiGoogle kakhulu. Ndiyakholwa ukuba ukuhlawula i-backlinks kwi-blogs ye-network (PBNs), kungakhathaliseki ukuba baphumelele kangakanani okwangoku, mhlawumbi indlela elula yokufumana inzame enzima kwaye ayifumaneki (ngokuphindaphindiweyo nangenakuphikiswa).
Nangona kunjalo, ii-blogs zenethiwekhi zangasese zisasaziwa ngoku, kwaye ndibone abaninzi be-webmasters abanomdla wokuzonwabisa kunye nokuzuza kwi-progress. Kodwa yintoni inyaniso? Ungathabatha njani isinqumo esenziwe kakuhle malunga ne-backlink kwiiblogi ze-intanethi? Makhe sizame ukwenza yonke into icacile - kunye namaqiniso athile abandayo kunye neziphakamiso zam ezifutshane zokujonga ubunzima kunye neengxaki zabo. Emva kwakho konke, kukuphela kwakho ukugqiba.
I-backlinks kwi-Network Blogs zilungile:
Ukuba nolawulo lwe-SEO, ndiyathetha ukuba unokufumana inzuzo enamandla ngaphezu kwabaqhubi bakho. Yonke into elula - ukuthenga izixhumanisi ezivela kwi-PBNs kuthetha ukuba ukhululekile ukwenza izixhumanisi zakho njengesiqhelo ukuvavanya nayiphi na indlela enokuzikhethela ngayo izixhumanisi ngokwazo kunye nezikhonkwane zabo zetekisi. Ewe, isici esithandekayo esichukumisayo - ngenxa yokuba kungekho esinye isicwangciso esinika inkululeko yokujonga yonke into esebenzayo-apha nangoku.
Ukufumana ukusukela kumagunya aphakamileyo kwangoko, njengama-PBNs unako ukuphakamisa igunya elidala kunye elinokuthenjwa elifanelekileyo lewebhu elikhoyo - ngaphandle kokulibaziseka. Ukuthengwa kwe-backlink kwiiblogi ze-intanethi kunokubonakala kukukhangeleka ngakumbi, ngokubhekiselele ukuba lolu hlobo lwezonxibelelwano lukhuni ngakumbi ukwakha ngendlela engokwemvelo.
Ukugcina ixesha elininzi kunye nomzamo, ngenxa yokuba ukubheja kwi-PBNs - akudingeki ukuba usebenze kunye nobudlelwane okanye ubuhlobo bokwakha. Ke mna, umsebenzi onzima gqitha ukuchonga amathuba afanelekileyo okufikelela kummandla mhlawumbi yimizamo engapheliyo yokuchitha ixesha.
Ngelixa i-PBN iyakhusela ixesha elifanelekileyo, bayashiya umnyango ovulekileyo ukujongana nocelomngeni obunzima kwizakhiwo zokuqhagamshelanisa. Ndiyathetha, umzekelo, ukuba ngamanye amaxesha akunakwenzeka ukufumana ezi zinto eziphezulu ze-PR zangaphambili ezivela kwimimandla edala kunye neyithemba. Ukwenza oku kubonakala kunzima ukuphathwa phambi kokuba ungene kuyo, ubuncinane ngaphandle kokuphula izikhokelo. Emva kwakho konke, ukutshala ixesha kunye nomzamo wokwakha ulwalamano oluchanekileyo okanye nayiphi na indlela enokufikelela kuyo - ayikwazi ukukunika naziphi na izilindelekileyo okanye iziphumo ezibonakalayo, ukuba ungathethi inkqubela eqinisekileyo kubambiswano oluhlala ixesha elide.
Nantsi, ezinye zezinto ezimbi kakhulu malunga ne-backlink kwiiblogs ze-intanethi, nje ngenxa yokuphelela. Kwiimeko ezinzima kakhulu, ukusebenzisa i-PBNs yesakhiwo soqhagamshelwano kungabangela isihlwayo sesikhokelo-ngamanye amaxesha kunokukwazi ukugqithisa xa zonke izinto ziphela ngokuvalwa ngokusisigxina ekufuneni. Ukuba kwenzeka ukuba kunjalo, bekungekho nto enokuyenza, ngaphandle kokwakha iwebhusayithi yakho enhle okanye iblogi kwakhona kwakhona ukususela ekuqaleni Source .